Sudan: Safidy stratejika ve ny maha-iray tsy mivaky? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Janoary 2010 6:45 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, عربي, polski, Swahili, Français, English
Ny asan'ny governemanta Sodane sy ny Hetsi-bahoaka [Popular Movment] tany atsimon'i Sodana, hoy ilay mpitoraka blaogy, dia toa sangy ratsy no fijery azy:
Nahoana no mitombo ny fahatsapàna fa hoe ny governemanta Sodane sy ny Hetsi-bahoaka, mpiara-miombona antoka aminy amin'ny fitantànana, dia tsy manao zavatra hafa afa-tsy ny milalao sarimaizina, eo imason'ny vahoaka Sodane?
Ny fihetsiketsehana toy izany, hoy i Hajj manoratra, dia manohintohina ny maha-iray tsy mivaky an'i Sodana:
Ny tsy asiako fisalasalàna dia ny fiombonan-tsain'ireo roa ireo hamaky an'i Sodana ao anatin'izao efa toerana misy azy izao ho firenena roa. Zava-poana ny firesahana ny maha-iray tsy mivaky ho tahaka ny zava-manintona. Nandritra ireo taona nifandimby teo aloha, tsy nisy mihitsy nandray andraikitra hahatongavana amin'izany – maha-iray tsy mivaky. Niady izy ireo ary namorona. Ny ankilany manozona sy manompa ny andaniny ary ny andaniny miezaka mandamindamina ny toe-draharaha ka manohy manao ny fombafombam-panambadiana ihany. Ny vokatra farany dia tsy misy ahafahan'izy ireo manome toky antsika fa hoe niezaka nanao zavatra mba hampanjary ny maha-iray tsy mivaky ho zava-mahasarika ry zareo ireo.
Am-pitanisàna zava-bita vao haingana, manamarika ny mpitoraka blaogy fa:
Fehiny, ny Hetsi-bahoaka [Popular Movement] dia nikarakara, tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo, famoriam-bahoaka izay nosakanan'ny governemanta. Mpitarika maro no voasambotra. Izy ireo dia isan'ireo nanao fanehoan-kevitra tamin'ny fahitalavitra nilaza fa ny governemanta dia mpanao didy jadona, raha adinon'izy ireo kosa fa ry zareo ireo koa dia tsy hafa fa mpiara-miombona antoka ao amin'io governemanta io. Nihodinan'ny governemanta ny resaka ka nolazainy fa niarahany sy ireo mpiara-miombona antoka aminy nanaiky ny lalàna maromaro manohana ny fifanarahana ho amin'ny fandriam-pahalemana sy ny fanohizana ny làlana demaokratika. Dia nifandray tànana ry zareo ary ny Hetsika dia nanoroka ny takolaky ny governemanta toy ireny hoe tsy nisy na inona na inona nitranga ireny akory.
Ho famarànana, hoy izy:
Fehiny, ny fanao toy izany no mahatery ny vahoaka tsy hino intsony ny maha-iray tsy mivaky, izay raha araka ny tena iainana azy dia tena safidy stratejika mihitsy. Tsy mino azy io intsony ry zareo satria efa nomena sary ho toy ny zavatra tsy azo ampiarahana amin'ny fahasamihafàna ara-poko, ara-pivavahana sy ara-toekarena izy io.
Fahalalahàna miteny 12 Desambra 2021
Fanoherana 20 Febroary 2021